Budata Clean Master maka Windows
Free Budata maka Windows (20.60 MB)
Budata Clean Master,
Clean Master bụ free kọmputa Cleaner na booster. Clean Master bụ mmemme Windows nwere nnukwu atụmatụ dị ka ihichapụ faịlụ ndị na-enweghị isi (ahịhịa), ọsọ ọsọ PC, nhicha nzuzo, mgbake faịlụ, mmelite akpaaka, faịlụ mkpocha dị ọcha, hichapụ faịlụ na folda kpamkpam, ihe nchọgharị akpaaka dị ọcha, melite ọkwọ ụgbọala ma dozie ọkwọ nsogbu Clean Master PC na Clean Master nwere ike ibudata maka free dị ka gam akporo ngwa.
Clean Master bụ kọmputa ihicha omume mepụtara maka ọrụ na-amasị iji kọmputa ha nke ọma ma hichaa ha ọ bụla ha ga-esi mere na ha ịrụ ọrụ adịghị ibelata. Master dị ọcha, nke na-agba ọsọ na kọmputa gị na nhicha, bụ nnukwu mmemme enyere nefu.
Kwesighi ịmara ihe ọ bụla iji jiri Master dị ọcha, nke mepụtara nụzọ yiri nke a maka ụdị ngwa ọdịnala yiri nke otu ụdị. Site na interface ya dị mfe nghọta, mmemme ahụ, nke na-enye otu bọtịnụ, na-enyere gị aka ihichapụ faịlụ niile na-enweghị isi (junk) gbakọtara na kọmputa gị.
Ọ bụrụ nị naghị eji kọmputa gị oge niile, faịlụ ndị a na-enweghị isi na-agbakọ oge, na-eme ka kọmputa gị belata ma were ohere na-enweghị isi na diski kọmputa gị. Ọ bụrụ n ị chere na m na-eji nlezianya na enweghị faịlụ ndị na-enweghị isi, ị mejọrọ. Nihi na faịlụ ndị na-enweghị isi nwere ike ịgbakọta nakụkụ dị iche iche nke kọmputa gị karịa oge, ọbụlagodi ma ị chọghị. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị jirila Chrome, Firefox na ihe nchọgharị yiri nke a ogologo oge na-enweghị nhicha, ọbụlagodi ị ga-eju gị anya site nha faịlụ enweghị isi ga-apụta mgbe usoro nyocha ahụ gasịrị.
Mmemme ahụ, nke na-enye gị ohere ihichapụ faịlụ niile junk na ihe nchọgharị, cache sistemụ, cache weebụ, ọdịyo na vidiyo, faịlụ ndekọ, karịrị 2 GB na nkezi, ọbụlagodi na kọmputa onye ọrụ kọmputa. Ọ dị ezigbo mma inwe ike ihichapụ faịlụ ndị a na-enweghị isi site na iji otu ịpị.
Ọ bụrụ nịchọrọ iji kọmputa gị rụọ ọrụ ọsọ ọsọ yana iji arụmọrụ dị elu na-ehicha ha oge niile, mana ị dị umengwụ maka ihe ndị ọzọ ị ga-eme, m ga-akwado gị ka ị budata Master dị ọcha nefu ma nye ya ịnwale.
Ebumnuche 7 iji budata PC dị ọcha Master
Hichaa faịlụ ndị na-enweghị isi (ahịhịa): Clean Masters advanced system na-enyocha ihe omume 1000. Site na otu ịpị, ị nwere ike ihichapụ faịlụ ndị na - enweghị isi (ihe fọdụrụ, ahịhịa) fọdụrụ na sistemụ iji hapụ ebe nchekwa kọmputa gị kpamkpam.
PC osooso: Kwuo goodbye ka usoro lag! Site na iji otu ịpị, i nwere ike ịkwụsị mmemme mmalite enweghị isi, gbalite oge buut, ma jiri amamihe bulie sistemu na ntọala netwọkụ.
Nzuzo dị ọcha: can nwere ike wepu ụdị 6 nke ihe ize ndụ nzuzo na otu ịpị. Gbochie intruders na wepu ize ndụ nchọgharị (nchọgharị weebụ) na ndekọ na-mgbochi nsuso.
Nkwalite ọkwọ ụgbọ ala: Booster Booster na-enyocha ma na-edozi ihe karịrị 5,000,000 ngwaọrụ na ndị ọkwọ ụgbọala. Na mpempe, ị nwere ike mfe idozi PC ọkwọ ụgbọala nsogbu.
Ọgụgụ isi nke nwere ọgụgụ isi: Nkọwapụta oge na nhicha nke faịlụ junk
Otu-pịa ịrụ ọrụ na-agba ume: Niji ọgụgụ isi na-akwalite sistemụ na ntọala netwọkụ iji zere ịdị lag.
Njikwa ihe ntanetị: Hichapụ ọdịnaya nke faịlụ dị nro na nke a na-apụghị ịkọwapụ na folda karịrị mgbake
Clean Master Ụdịdị
Nha faịlụ: 20.60 MB
Mmepụta: Cheetah Mobile